ဤတွင်သင့်အားသြဇာညောင်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်သင်မည်သို့လောင်ကျွမ်းသွားမည်နည်း | Martech Zone
သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 3, 2014 ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 25, 2021 Douglas Karr
ကျနော်တို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်၏ထောင်ချောက်အကြောင်းကိုအရင်ကရေးသားခဲ့သည်။ တစ် ဦး အဖြစ်အခြိနျမှနျမှလျော်ကြေးပေးသူတစ် ဦး အဖြစ် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်ဆံရေး setup ကိုမည်မျှသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်သံသယမိပါတယ်။
ဖြစ်ရပ်မှန်အမှတ်၊ ယခုနှစ်အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည် အုတ်ဖို ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဒေသခံတစ်ယောက်ပါ၊ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေဖိတ်ကြားတဲ့ရှေးရှေးတွေအများကြီးရှိတယ် - လူကြိုက်များတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရဖို့အတွက်လူကြိုက်များတဲ့ရမှတ်များ Indianapolis။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းအဆိုပါယာဉ်ရပ်နားဖြတ်သန်းနှင့် suite ကိုလက်မှတ်များပေးနှင့်ဖြစ်ရပ်နှင့်အတူအားလုံးထွက်သွားလေ၏။ ငါတကယ်မသွားခဲ့ဘူး၊ ငါနောက်ဆုံးမိနစ်မှာပaိပက္ခဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသွားပြန်တယ်။ တစ်ချိန်မှာနာမည်ကြီးကားမောင်းသူတစ်ယောက်ကသူတို့လမ်းလျှောက်လာတာကိုဘယ်သူမှမသိခဲ့ဘူး။ သူတို့ကသူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဓာတ်ပုံမထုတ်ခင်သူကမေးတယ်။ တကယ့်ကိုတွေဆီကနေ! သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဟာဆလင်ဒါအားလုံးအပေါ်လွဲချော်သွားတယ်။ သူတို့ပိုက်ဆံမဖြုန်းအောင်သေချာဖိတ်ကြားခံရချိန်မှာငါလမ်းကြောင်းကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါ့ကိုဘယ်သူမှပြန်မခေါ်ခဲ့ဘူး ငါလမ်းကြောင်းတိုးမြှင့်ကူညီပေးနေသောအဓိကပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်အတူအချိန်အတန်ကြာတောင်းဆိုခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာတောင်မှဖြစ်ခဲ့သည် ... သူလည်းငါ့ကိုပယ်။
အောင်မြင်သော၏တိကျသောဒြပ်စင် ၃ ခုရှိသည် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်မဟာဗျူဟာ နှင့်ဤမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသူတို့အားလုံးကိုလွဲချော်:
အဆိုပါမ အဆိုပါသြဇာပွဲစဉ်၏ပရိသတ်ကို သင်ရောက်ရှိဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပရိသတ်ကိုလား။ နောက်လိုက် ၃၀ ယောက်ရှိတဲ့ကျွန်တော့်ထက်ပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားဖို့နောက်လိုက် ၁၀၀ ရှိတဲ့လူတွေကိုဖိတ်တာကပိုကောင်းတယ်။ ပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုငါဘယ်တော့မှမပြောဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကိုဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဘာမှမသိဘူး။
အဲဒီမှာရှိခဲ့သည် ဝေမျှဖို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများအတွက်ပုံပြင် ပဲ့တင်ထပ်နေမယ်လို့သူတို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုနှင့်အတူ? ပြသခြင်း၊ အစာစားခြင်း၊ ဘီယာသောက်ခြင်းနှင့်အခမဲ့သွားရန်လမ်းကြောင်းသို့သွားခြင်းသည်ဖြစ်ရပ်မှန်မဟုတ်ပါ။ မိသားစုဆက်သွယ်မှု၊ သမိုင်း၊ မောင်းနှင်သူ၊ နည်းပညာ၊ ဘီယာ pics မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမဆိုပြောဆိုရန်လမ်းကြောင်းသည်ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဲဒီမှာရှိခဲ့သည် သက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ခေါ်ပါ ကင်ပိန်း အိုကေ, ဒါကြောင့်ဒီလူမှုရေးသြဇာညောင်းသူအားလုံးဟာအုတ်ဖို့ခြံဝင်းအကြောင်းကိုပြောသောကြောင့်ထိုနေ့၌ရှယ်ယာများကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိနိုင်သည်။ ဟားဟား! ငါလုံးဝနောက်တာပါ။ ပြိုင်ပွဲအကြောင်းပြောနေကြတဲ့သိန်းနဲ့ချီတဲ့ပရိတ်သတ်တွေရှိပြီးသားဘာလို့လဲဆိုတော့ဆူးမရှိဘူး။ ဤသြဇာသည်ဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့ပါ။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည်လူများအားပုံမှန်ပရိတ်သတ်အပြင်ဘက်မှလမ်းကြောင်းသို့ခေါ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်ဆိုပါက၎င်းသည်မကူညီနိုင်ပါ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုငါမကြားခဲ့ဘူး။ တကယ်တော့ငါလက်မှတ်အခမဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုရယ်မောသောသူသည်ငါ့သူငယ်ချင်းရဲ့အပြင်ဘက်တွင် NO ဇာတ်လမ်းကိုကြား၏။ လိုအပ်တဲ့ပုံပြင်တွေဟာကိုက်ညီသင့်တယ် ဝယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်သို့ချည်နှောင်ကြောင်းမဟာဗျူဟာများ.
ထိုသို့လာရောက်လည်ပတ်သူများကိုတာ ၀ န်ယူရန်ဤမျှလောက်များစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးသည်။ နောက်လာမည့်လူမှုရေးကွန်ဖရင့်တွင်လက်ကမ်းစာစောင်၊ လမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူတို့အားဝေမျှရန်လျှော့စျေးကုဒ်တစ်ခု၊ တွစ်တာ၊ မွမ်းမံချက်များနှင့်ဓာတ်ပုံလည်ပတ်မှုစာရင်းများ၊ သုံးစွဲသူများနှင့်သူတို့ဘာကြောင့်သွားသင့်သည်ဟူသောအကြောင်းကိုပုံပြင်များနှင့်ညှိနှိုင်းရန်ညှိနှိုင်းထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လက်မှတ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဝယ်ယူမည်၊
သင်ငွေပေးချေခြင်းသို့မဟုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောသူများကိုတစ်စုံတစ်ခုကိုပေးလိုက်လျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်အကျိုးပြုလိမ့်မည်ကိုသေချာပါစေ။ ငါမှာသြဇာသက်ရောက်သောစျေးကွက်ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အချို့သော site ပေါ်တွင်သြဇာရှိသူများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်သူတို့အားအခမဲ့လက်မှတ်အချို့ကိုလွှင့်ပစ်ခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ ဤသည်ဤမျှလောက်ပိုကောင်းပါပြီနိုင်!
Tags: ပန်းခြံindianapolis ပြိုင်ပွဲသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးkloutပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်း